Izinhlobo ezimnyama zekati | Amakati kaNoti
Ukuzala kwekati elimnyama
UMonica sanchez | | Izinhlobo
Amakati amnyama, abekade ezondwa, manje akhuleka kubantu abaningi, kubandakanya nami. Uboya babo obuthambile futhi obucwebezelayo, ukubuka kwabo okuyindida nobuntu babo obukhetheke kakhulu kubenza babe abangane abangakholeki. Kepha bakuluphi uhlanga?
Uma ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zamakati amnyama, eNoti Gatos sizokutshela. Ngakho-ke ungaphuthelwa 🙂.
1 Ikati lizala ngezinwele ezimnyama
1.1 Ikati laseMelika i-Shorthair
1.2 I-Angora Cat yaseTurkey
1.3 Ikati leBombay
1.4 Ikati elivamile laseYurophu
1.5 Ikati laseMaine Coon
1.6 Ikati lasePheresiya
2 Uyini umehluko phakathi kwekati elimnyama neBombay?
Ikati lizala ngezinwele ezimnyama
Okumnyama umbala abantu abavame ukuheha ukunakwa okuningi, kodwa ngeshwa kuvame ukuhlotshaniswa nokubi. Amazwana afana nokuthi "Ngibona yonke into emnyama" asitshela ukuthi lo muntu ubhekene nesikhathi esibi kakhulu empilweni yakhe. Kodwa ingabe kunjalo ngamakati amnyama? Ingabe lezi zilwane zinenhlanhla?
Ukuhlala nomunye wabo kunesipiliyoni esihle futhi esimangalisayo. Kukwazi uthando olumsulwa. Bangaba ngabahlubuki impela ebusheni babo, kepha yiliphi ikati elingekho kuleyo minyaka? Angisoze ngakhathala ukuphinda lowo mbala awenzi ikati, kepha ngihlangane nama-panther amancane amancane, empeleni manje ngihlala noyedwa, futhi iqiniso ukuthi banomlingiswa okhethekile. Uma sebekhulile bavame ukuzola kakhulu, babe nokuthula, bathandane futhi bayathandeka.
Ngakho-ke, izinhlobo zamakati amnyama okufanele wazi yilezi:
Ikati laseMelika i-Shorthair
El ikati laseMelika elifushane Kuyinto yokuzalwa e-United States. Umzimba wayo ungosayizi ophakathi nendawo, umbozwe ngoboya obufushane, obukhulu obunzima ukuthinta. okungaba noma imuphi umbala: omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, ukhilimu, isibopho, ... futhi futhi omnyama, onesisindo esiphakathi kwamakhilo ayisi-6 kuya kwayi-8
I-Angora Cat yaseTurkey
El I-Angora ingenye yezinhlobo ezindala kakhulu zekati. Kakade ngekhulu le-XNUMX izicukuthwane zazifuna ukuhlala noyedwa emakhaya abo, ngoba ngaleso sikhathi babazi kuphela ikati elalinezinwele ezinde. Isinda phakathi kwamakhilo ama-3 kuye kwayi-5, futhi yize uhlobo lungaba nemibala ehlukene (emhlophe, e-tan, e-brindle, njll.), futhi ingaba mnyama.
Ikati leBombay liwuhlobo lwekati elimnyama elingagunci. Umzimba wayo uvikelwe ungqimba lwezinwele ezimnyama kuphela ngombala, nasekhanda unamehlo amabili ayindilinga futhi ahlukene kahle.. Inemisipha, icwecwe futhi inosayizi ophakathi nendawo, inesisindo esiphakathi kwamakhilogremu ama-3 kuye kwayi-7, iba ngabesifazane abancane kakhulu. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngalolu hlobo? Chofoza lapha.
Ikati elivamile laseYurophu
Ikati lami benji
El ikati elivamile lase-europe kungaba yimuphi umbala: omhlophe, owolintshi, ibrindle, i-bicolor, ... futhi empeleni kumnyama. Kusukela ngesikhathi iba umdlwane ize ifinyelele ebudaleni, inezinwele ezithambile, ezicwebezelayo, ezinombala omnyama obukhali futhi enempilo enhle, kepha njengoba iguga, izinwele zayo ziyalahleka.. Kulula ukuthola izinwele ezimhlophe ezithile; isibonelo, ikati lami uBenji linamanye entanyeni, emqaleni, nekati lami uBicho kubukeka sengathi lizalwe limpunga as, njengoba enamanye emhlane nasentanyeni. Ingaba nesisindo esiphakathi kuka-2,5 no-7kg, owesifazane abe mncane kunowesilisa.
Ikati laseMaine Coon
IMaine Coon iyi- Usayizi ophakathi nendawo, ikati elinemisipha, enesisindo esiphakathi kuka-3,6 no-8,2 kilos, ngokuba ngabesifazane abancane kunabo bonke. Umbala wayo ungahluka kakhulu, kepha amathoni ansundu ayagqama, futhi abe mnyama. Kukholakala ukuthi idabuka eMaine, e-United States, lapho kwafika khona amakati e-Angora avela eTurkey evela enkosazaneni yase-Austria okuthiwa u-Marie Antoinette, owabalekela izinkinga iFrance eyayinazo ngasekupheleni kweminyaka ye-1700.
El Ikati lasePheresiya ingenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu. Inhloko yayo eyisicaba kanye noboya bayo obude nobuthambile kwenze yaba esinye sezilwane ezithandwa kakhulu yibo bonke, njengoba isimilo sayo sikhetheke kakhulu. Uhlala kahle efulethini, futhi uthule, akudingeki enze ukuzivocavoca okuningi njengokuthi, njenge-sparkler. Kungaba nemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi omnyama, futhi inesisindo esiphakathi kuka-3,5 no-7kg.
Uyini umehluko phakathi kwekati elimnyama neBombay?
Ikati elivamile elimnyama laseYurophu neBombay ziyefana kakhulu, kepha zinomehluko ophawuleka kakhulu:
OrigenYize kungaziwa namuhla ukuthi kwavela nini amakati ajwayelekile anezinwele ezimnyama, uhlobo lweBombay luwumphumela wesiphambano esiphakathi kwamakati aseBurma ansundu namakati anezinwele ezimnyama zaseMelika amaShorthair ngawo-1950.
ColorYize bobabili bengabantu abamnyama, i-European ejwayelekile iyohlala inezinwele ezimhlophe, ngisho nebala elimhlophe. IBombay ibimnyama qwa kusukela yazalwa 🙂.
Futhi ngalokhu senziwe. Siyethemba ukuthi ukuthole kukuthakazelisa ukwazi izinhlobo ezahlukahlukene zamakati amnyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ukuzala kwekati elimnyama
Ingabe amakati ayaluqonda ulimi lomuntu?
Kungani ikati lami ligingqika uma lingibona